Uphenyo: Sidalula ubufakazi bezinhloli uZuma agabe ngabo - Bayede News
Isithombe: nguThuli Dlamini
Ukunyuka kwentengo kushiye abalimi bencumile
Isexwayiso ngembodla wukuthi ungalokothi uyivalele ekhoneni ngoba yilapho iba yingozi kakhulu. Kuthiwa ilwa ngakho konke ukuze iphume ekhoneni. Kanti esinye isisho saboHlanga sithi ‘Abazingeli benyathi balala ubucwayimbana’. Kokubili lokhu kubukeka kusichaza kangcono isimo esibhekene nalowo owayenguMengameli wezwe, uMnu uZuma.
Ngakolunye uhlangothi labo ababekade befuna ukuba aquliswe amacala bayakholwa ukuthi sebemuvalele ekhoneni. Kanti ngakolunye uhlangothi, uZuma kukhona izinduku agabe ngazo naseqalile ukugadla ngazo ngenhloso yokudumaza labo abathi akaye ezikhindini. Enye yalezi zinduku ngubufakazi obuqoshiwe bamakhasethi ezinhloli nayilapho uZuma ethembe ukuthi ngabo uzobhidliza wonke amacala abekwe wona nazowaveza njengetulo labathize kuHulumeni, ezinhlakeni zezokushushisa, izinhloli nabathile bezindaba.
ElaboHlanga selinawo umbhalo oyimfihlo ongamakhasi angama-95 wezinhloli nowathunyelwa eHhovisi likaMengameli wezwe ngomhla zingama-30 kuMasingana ngowezi-2015. Umbhalo wabe ubhalwe ngomhla zingama-29 kuMasingana ngowezi-2015. Ngaphansi kwesihloko esithi: Recordings or transcripts provided to the NPA as per their request SSA/DGG01/1/15/2. Umbhalo wabe ubhalwe yiNxusa uSonto Kudjoe owabe enguMqondisi Jikelele kwiState Security Agency okungolunye uphiko lwezobunhloli kuleli. Omunye umbiko ElaboHlanga elinawo ngobhalwe ngabeNational Intelliegence Agency (NIA) owaziwa ngeleNational Intelligence Agency Communication Report. Lona weNIA ElaboHlanga laqala ukuba nawo ezinyangeni ezedlule nokwathi lingawuthola kwabe sekugqekezwa amahhovisi kwathathwa amafayela nanamuhla okungakaze kwaziwe ukuthi kwenzakalani njengoba kwangena ababehlome ngezibhamu. Udaba lwabikwa emaphoyiseni kepha akukaze kufike mbiko othi icala laphelelaphi.
Okumqoka ngalokho okungaba yinoni kuZuma nabameli bakhe wukuthi ababhali bombiko (wokuqala) kukhona abakuvumayo. Okokuqala wukuthi ukwenziwa kophenyo olunzulu kwalandela ukuputshuka ‘komqulu owabe umqoka’ nowaziwa ngele “Special Browse Mole Consolidated Report (SBCR). Nokwathi kungezwakala ukuthi uputshukuile abeNational Security Council (NSC) baqala uphenyo olusezingeni eliphezulu ekutheni ufike kanjani kulabo okwabe kungamele ufike kubo ikakhulu abezindaba.
Kwathi nxa kwenziwa uphenyo kokwencwadi ebhalelwe iHhovisi likaMengameli kwatholakala ukuthi umqulu lo oyimfihlo wabe uqhamuke kwabeDirectorate of Special Operations (DSO). Okunye okwatholakala wukuthi wabe uhlanganiswe ngabaphehli bozwathi. Khona lapho kuwo lo mbhalo odluliselwe eHhovisi likaMengameli, umbhali uyaqinisekisa ukuthi kwathi uma kuqhathaniswa kwavela ukuthi indlela lo mqulu ohlanganiswe ngayo uyefana ncamashi nendlela okwabe kwenza ngayo uphiko lwezinhloli ngezikhathi zobandlululo nezabe zisabalalisa amanga ngabathile ikakhulukazi kuxovwa lapha emaqenjini abe elwela inkululeko. Ekuqhubekeni kophenyo incwadi iveza ukuthi kwabe sekuvela ukuthi abaphehli bozwathi babenokuxhumana nabathile kwaDSO, abaphenyi bathola nokuthi ngaphandle komqulu owaziwa ngeSBCR kukhona omunye owabe wenziwe ngomunye uMphehli wozwathi owaziwayo nowabe ubizwa nge: “Crime Analysis Division (CAD): Project Proposals: November 2003. Ngokombhali wencwadi, okuhlalukayo wukuthi lo mqulu wabe ulandela ingxoxo yangomhla zili-14 kuLwezi wezi-2003 phakathi kuka-Adv uBulelani Ngcuka kanye noMphehli Wozwathi owabe aziwa ngegama uBertha Kleerman.
Akucaci ngezigidi zesinxephezelo sakwaMgayi
Emquliwini ElaboHlanga elinawo kukhona izingxoxo ezahlukene eziphakathi kuka-Adv uBulelani Ngcuka no-Adv uLeonard McCarthy; ephakathi kuka-Adv uLeornard McCarthy nosomabhizininsi uMnu uMzi Khumalo. Ephakathi kuka-Adv uMcCarthy nowabe enguNgqongqoshe uMabandla, neyabe iphakathi kuka-Adv uMcCarthy noMnu uLuciano Luigi. Ikhona nengxoxo ephakathi kuka-Adv uMcCarthy noMnu uFaiek Davids, ephakathi kowayenguNgqongqoshe uKasril no-Adv uMcCarthy. Ephakathi kuka-Adv uBillie Downer, intatheli uSam Sole kanye noMnu u-Ivor Powell. Kulo mbhalo oyimfihlo kuqoshwe izinkulumo igama negama, usuku kanjalo nesikhathi okwabe kuxoxwa ngaso.
Yize okunye okuqukethwe kulo mbhalo kungathathwa njengokuyimfihlo kanjalo nento obekungamele idalulelwe umphakathi kanjalo nobungozi nxa zonke, elaboHlanga emveni kokuthintana nabameli libone kunesidingo sokuthi lo mbiko luwethule ngolwethunga ukuze kube ngabafundi nomphakathi othatha isinqumo. Imibiko eyehlukene ngalolu daba izosatshalaliswa ngokushicilelwa kwelaboHlanga, eliphuma njalo ngoLwesihlanu kanye nakusizindalwebu ku-www.bayedenews.com kanye naku-E-Edition Iphepha laboHlanga.